Admin Officer (Maintenance) (For Male)
Supreme Group of Companies – Posted by Pro-Recruiter1991
-AGTI (EP) Diploma or Technical High School Certificate ရရှိထားသူဖြစ်ရမည်။
-Air-con servicing ကို ကျွမ်းကျင်စွာလုပ်နိုင်သူ၊လုပ်နေသူ ဦးစားပေးမည်။
-Companies အတွင်းရှိ လျှပ်စစ်ပိုင်းဆိုင်ရာများ ကောင်းစွာနားလည်တတ်ကျွမ်းသူဖြစ်ရမည်။
-CCTV နှင့်သက်ဆိုင်သော အခြေခံအချက်အလက်များ သိရှိပြီး အသုံးပြုနိုင်သူဖြစ်ရမည်။
-ရုံးပိုင်းဆိုင်ရာ လျှပ်စစ်ပိုင်းများ/ဖုန်းလိုင်းများ/CCTV နှင့် Air-Con Servicing ပိုင်းများ အတွေ့အကြုံရှိသူဖြစ်ရပါမည်။
No.(87/88),Bahosi Complex,Lanmadaw Township,Yangon. Ph-01 229791 / 01 229792 Gmail – [email protected]
Job Categories: Engineering. Job Types: Full-Time. Job Tags: admin officer (maintenance) (for male). 166 total views, 1 today Apply for this Job / အလုပ်လျှောက်လွှာ